CMS लाई दोष नदिनुहोस्, थिम डिजाइनरलाई दोष दिनुहोस् Martech Zone
आज बिहान मैले उनीहरूको बारेमा सम्भावित ग्राहकको साथ ठूलो कल गरेको थिएँ इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीतिहरू। उनीहरूले उल्लेख गरे कि तिनीहरू आफ्नो वेबसाइट विकास गर्न एक फर्मसँग भेट गर्दै थिए। मैले कल गर्नु भन्दा पहिले उनीहरूले पहिले नै याद गरे WordPress र सोध्यो यदि उनीहरूले यसलाई प्रयोग गरिरहन्छ भने। उनले भनिन् बिल्कुल हैन र भने कि यो डरलाग्दो थियो ... उनी आफ्नो साइटसँग आफूले गर्न चाहेको केहि गर्न सक्दिनन्। आज उनी एक फर्मसँग बोल्दै छिन् जुन अभिव्यक्ति इञ्जिनमा विकसित हुन्छ।
मैले बुझाउनु पर्छ कि हामीसँग काम गर्यौं अभिव्यक्ति ईन्जिन धेरै व्यापक, पनि। हामीले जुमलासँग पनि काम गरेका छौं, Drupal, मार्केटपाथ, इमेभ्याक्स र अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूको एक होस्ट। जबकि केहि सीएमएस प्रणालीहरूलाई खोज र सामाजिकको सबै सुविधाहरू लिन केही कोमल मायालु हेरचाह आवश्यक पर्‍यो, हामीले पत्ता लगायौं कि धेरै जसो सीएमएस प्रणालीहरू बराबर बराबर सिर्जना गरिएका छन्… र वास्तवमै प्रशासनिक कार्यक्षमता र प्रयोगको सहजताबाट मात्र अलग गरिएका छन्।
म शर्त लगाउन तयार छु कि यो क्लाइन्टले WordPress मा उनीले गर्न चाहेको केही पनि गर्न सक्दछ। समस्या वर्डप्रेस हैन, यद्यपि यो उनको विषयवस्तु विकसित गरिएको थियो। हामीले भर्खरको साथ काम गर्न शुरू गर्यौं भन्ने एक ग्राहक VA लोन पुनर्वित्त कम्पनी हो। तिनीहरू एक महान कम्पनी हो - दिग्गज परोपकारीहरूलाई पैसा दिनुहोस् जब उनीहरू रेफरल जम्मा गर्छन्। यद्यपि हामी वर्डप्रेस अनुकूलनको एक टन गर्छौं, हामी पर्याप्त अज्ञेयवादी छौं कि ग्राहकको सुन्दर, अप्टिमाइज, र प्रयोगयोग्य साइट लगभग कुनै CMS मा उनीहरूले WordPress मा पाउन सक्छन्। वर्डप्रेस केवल अहिले नै धेरै लोकप्रिय छ त्यसैले हामी आफैले अरूलाई भन्दा त्यस प्लेटफर्ममा धेरै काम गरिरहेको भेट्दछौं।
VA लोनले अनुकूलन विषयवस्तु खरिद गर्‍यो र हामीलाई तिनीहरूको खोजी र सामाजिक रणनीतिहरू विकास गर्न भाडामा लिए। विषयवस्तु एक आपतकाल थियो ... साइडबार, मेनू, वा विजेटको प्रयोग छैन। प्रत्येक तत्व उनीहरूको टेम्प्लेटमा हार्ड-कोड गरिएको थियो कुनै पनि वर्डप्रेस द्वारा मिल्ने उत्कृष्ट सुविधाहरू प्रयोग नगरी। हामीले थिमको पुनर्विकास, एकिकृत गरेर अर्को दुई महिना खर्च ग .्यौं गुरुत्वाकर्षण फारम लीड 360० को साथ, र साथै विजेट विकास गर्दैछ जुन उनीहरूको बैंकबाट उनीहरूको साइटमा प्रदर्शन गर्नको लागि सबैभन्दा नयाँ धितो दरहरू पुनःप्राप्त गर्दछ।
यो थिम डिजाइनर र एजेन्सीहरूको साथ प्रणालीगत समस्या हो। उनीहरूले बुझ्दछन् कि कसरी साइट राम्रो देखिन्छन्, तर कसरी ग्राहकले पछि चाह्न सक्ने सबै फरक सुविधाहरू समाहित गर्न पूर्णरूपमा सीएमएस प्रयोग गर्ने छैन। मैले ड्रपल, अभिव्यक्ति इन्जिन, एक्रिसफ्ट स्वतन्त्रता, र मार्केटपथ साइटहरू दुबै सुन्दर र प्रयोगयोग्य थिए ... CMS को कारणले होइन, तर विषयवस्तु विकास गर्ने फर्मले सबै CMS सुविधाहरू समेट्न पर्याप्त अनुभवी भएको थियो जुन लीभरेज खोजी, सामाजिक, ल्यान्डि pages पृष्ठहरू, फारमहरू, इत्यादि समावेश हुन सक्छ। आवश्यक छ।
एक राम्रो थिम डिजाइनर एक सुन्दर विषयवस्तु विकास गर्न सक्दछ। एक उत्कृष्ट थिम डिजाईनरले एक थिम विकसित गर्दछ जुन तपाइँ आउन वर्षौं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (र भविष्यमा सजीलै माइग्रेट गर्नुहोस्)। CMS लाई दोष नदिनुहोस्, थिम डिजाइनरलाई दोष दिनुहोस्!
टैग: CMSसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीDrupalगुरुत्वाकर्षण रूपहरूimavexइनबाउन्ड मार्केटिङएकीकरणJoomlaबजार बाटोविषयविषयवस्तु डिजाइनWordPress
टाउकोमा कील। हामी वर्डप्रेसको साथ हाम्रा प्रोजेक्टहरूको राम्रो% ०% विकास गर्छौं र त्यहाँ यस्तो समय आउँदछ कि तपाईं यस्ता टिप्पणीहरू सुन्नुहुन्छ र "ठीक छ, यसले गर्न सक्दैन ____"। वास्तवमा कुन सहि प्रतिक्रिया हो, "यदि त्यहाँ पहिले नै यस्तो केही छैन जुन तपाईंको आवश्यकताहरू (विषयवस्तु र / वा प्लगइनहरू) लाई मिल्दछ, र यदि तपाईंको विकासकर्ताले एपीआई कसरी प्रयोग गर्ने जान्छ भने, तपाईं आफूले गर्न चाहानुभएको केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जब सम्म यो समय र बजेट हुन्छ। "
तर कहिलेकाँही ग्राहकको दिमागमा केहि "नयाँ" सेट हुन्छ, त्यसैले तपाईं या त यसको साथ रोल गर्नुहोस् वा यसलाई तल गर्नुहोस्।
त्यो चाखलाग्दो छ। Reusser Design मा काम सुरु गरेपछि, म ईई भित्र काम गर्न प्रमुख रूपमा स्विच गरेको छु, हाम्रो मनपर्ने CMS, WordPress बाट, जुन मसँग मसँग काम गर्थें जब म आफैंमा थिएँ। म तपाइँसँग मेरो डब्ल्यूपी थिममा सबै फरक पार्ने कुरामा सहमत गर्दछु। WooTheme क्यानभास थिम जस्तै केहि, उदाहरण को लागी, भित्र काम गर्न को लागी धेरै राम्रो थियो, जबकि त्यहाँ बाहिर अन्य "प्रिमियम" र कस्टम थिमहरू छन् कि मात्र ... आइकी छन्।
भनिएको छ, म वेबसाइट सामग्री प्रबन्धनको लागि वास्तवमै EE लाई मन पराउँछु, जहाँ "ब्लगि” "प्राथमिकता छैन। यो सरल छ, यो रमणीय छ, र यो WP भन्दा बढी शक्तिशाली छ, मलाई लाग्छ। अझै, जब तपाइँ तपाइँको CMS भित्र धेरै लेखन वा ब्लगिंग गर्नुहुन्छ, केहि पनि त्यस लेखकको लागि WP को प्रयोगकर्ता अनुभवलाई पिट्दैन।
तपाइँको पोष्ट को लागी धन्यवाद!
फेब्रुअरी १,, २०११ 28:१:2012 अपराह्न
@ अफेल्: डिस्कस जब म ईईको कुरा गर्दछु म अलि बेसी हुँदछ, यो MVC विकासकर्ताहरूको लागि निश्चित रूपमा अधिक लेखिएको हुन्छ। दिमागमा त्यो साथ, म बुझ्छु कि विकास अलि बढी मैत्री र स्केलेबिलिटि हो र कुनै मुद्दाको जस्तो छैन। किनकि म आफैंलाई औपचारिक विकासकर्ताको रूपमा सोच्दिन, म सजिलैसँग सँधै रहन्छु जसलाई धेरै चिन्ताको खाँचो पर्दैन (तर इमानदारीसाथ अझ बढी क्षति निम्त्याउन सक्छ!)।
यो साइट ट्वेंवेलेवनको परिमार्जन गरिएको संस्करण देखिन्छ। त्यो के हो? जे भए पनि, तपाईं सहि हुनुहुन्छ; यो सबै थिमको बारेमा हो, सीएमएसको बारेमा होइन। तर WordPress, IMHO, यस पलमा काम गर्न उत्तम प्लेटफर्म हो।
राम्रो आँखा, @ jonschr: डिस्क! यो एक उच्च संशोधित ट्वीन इलेवन विषयवस्तु हो ... हामीले यसलाई साच्चै फाड्यौं! हामीले भर्खरका सबै थिमका नामहरू मास्क गर्न सकेका छैनौं। र हामी यो तथ्यलाई मनपर्दछौं कि हामी @Wordpress मा राम्रो मान्छेहरू दिइरहेका छौं: उनीहरूले पाउनु पर्ने ध्यान दिनुहोस्।
जिज्ञासा भन्दा बाहिर: म यहाँ सीधा HTML ल्यान्डि page पृष्ठ मार्फत पुगें जुन यस फिडमा खिचेको थियो। किन तिनीहरूलाई सिधा एकीकृत छैन? त्यो WordPress को एक हो 'मेरो लागि सबै भन्दा ठूलो ड्रॉ; तपाइँ जुनसुकै डिग्री रोज्नुभयो भने फरक पृष्ठ टेम्प्लेटहरू।
नमस्ते @ jonschr: disqus - अवतरण पृष्ठ कहाँ थियो? हामी लि sites्कहरू साइटमा बाहिर प्रकाशित गर्दछौं http://www.corporatebloggingtips.com तर ट्राफिकलाई एकल स्रोतमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ। बरु म यहाँ सबै यातायात छ, यस डोमेन को अधिकार माथि पुश, र कुनै पनि लिंक पनी फिर्ता इन्जिन संग यो डोमेन माथि पुश सुनिश्चित। आशा छ कि तपाईको मतलब यही हो! यदि मैले बहु डोमेनहरूमा प्रकाशन गरेको छु भने, म त्यो अधिकार विभाजन गर्दैछु ... मसँग २ कमजोर साइटहरूको सट्टा १ कडा साईट हुन्छ।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::29। बिहान
हो, त्यो एक हो! हम्म। समझ बनाउँदछ ... जे होस्, त्यसो भए, किन केवल "साइट अवतरण पृष्ठ" लाई यस साइटको अनुक्रमणिका पृष्ठ बनाउँदैन? कुनै उद्देश्य कुनै अपराध छैन; लाभ के हो भनेर मात्र सोचें। मलाई अवतरण पृष्ठ मनपर्‍यो, BTW। धेरै राम्रो।
@ jonschr: disqus कुनै अपराध लिइन! तपाइँ वर्डप्रेस साइट पनि हो भनेर महसुस गर्न चकित हुन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ एक टन आन्तरिक पृष्ठहरू छन् जुन खोज ईन्जिनहरूमा दृश्यात्मक हुनेछ। यो पुस्तक रिलीज भएको समयमा, यो पुस्तकको लागि विशेष रूपमा अवतरण पृष्ठ साइट हुनु धेरै सामान्य थियो। म एउटा डोमेन लिन चाहान्छु जुन केवल "कर्पोरेट ब्लगिंग" को लागी अनुकूलित भयो र यसले एकदम राम्रो काम गर्यो। म सामग्री बारम्बार साइटमा अद्यावधिक भएको चाहान्छु तर म पूरै अर्को ब्लग लेख्न चाहन्न - त्यसैले फिड, सामाजिक संचारमा तान्दै, र यसलाई घटना क्यालेन्डरको रूपमा प्रयोग गर्दा यसलाई निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। यो धेरै सर्तहरूको लागि एकदम राम्रो स्थान हो त्यसैले यसले काम गर्छ र हाम्रो लागि पुस्तकहरू बेच्न जारी रहन्छ!